Marsabiit, Keenyaa: 'Ani Qabballe Duubaati. Booranillee Qabballe Duubaa qaba' - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Qabale Duba
Qabballe Duubaa Soraa Kaaba Keenyaa, Kaawuntii Marsabit fulaa Torbii jedhanitti dhalattee kan guddatte yoo tahu gostishee ammoo gosa Gabraati. Fuula deemtu cufatti waahee faayidaa barnoonni qabu dubbatti.
Gaaffiifi deebii kallattiin Facebook Live irratti gaazexeessituu BBC Firaa'ol Balaay waliin taasisteen dhimmoota garagaraarratti dubbatteetti.
Dhiyeenya kana badhaasa Global Citizens Award People's Choice jedhu badhaasa Doolaara Ameerikaa 50,000 waliin argatteetti. Badhaasni kunis hojii isheen dhaabbata hundeessite Qabale Duba Foundation'n hojii hawaasa keessatti hojjettuuni.
Faawundeeshiniin Qabballe Duubaa akkamitti jalqabe?
Akkaataa jalqaba dhaabbatichaa wayita ibsitu Qabballeen: ''Anin ollaa diqqaa keessan dhaladhe. Ammoo galata Waaqaa masoomoo argadhee soomee (baradhee), fuula jiru tanaan baye. Achis waanin jedhe 'Ya soome, ya il (ija) banadhe, bakka dhufetti deebi'ee dubartoota keenna cufa qarqaara jedhee kahe,'' jechuun dubbatti.
Otoo kana hin jalqabin dura garuu, dorgommii bareedinaa 'Miss Tourism Marsabit' jedhamu mo'attee tokkoffaa baate. Akka Keenyaattis, dubartoota 43 keessaa lammeessoo baate.
''Gara dhibii deemee modeeling hin deemne (itti hin fufne). Ollaa kiyyatti deebi'ee ijoolleefi nadheen qarqaaruu jalqabadhe,'' jetti Qabballeen.
Faawundeeshiniin isin hundeessite hojiiwwan hojjetu keessaa:
Shamarraniif gorsa kennuu,
'Sanitary pads' qooduu
Waahee nagayaa Gabraafi Booranaa
Aadaa boodatti hafaa
Nagaa Gabraafi Booranaa
Dhaabbanni Qabballen hundeessite waahee dhibii nagaa Booranaa fi Gabraa jidduurratti ni hojjeta.
''Ollaan ani keessaa dhufe Torbi jedhan. Torbiin kuniin ALA 2005 keessa gaafa Gabraafi Booranni wal haate, nama hedduu dhabne nulleen. Hadhiin nam tokkollee dansaa niti,'' jechuun haala nagayaarratti hojjechuuf ishee kakaase dubbatti.
''Akka intala Torbii baateetti waani jedhu, nu Gabraafi Booranni nam tokko. Afaan takkaa dubbanna, obboleeyyan. Ammoo wanni waliin nu hadha - siyaasa,'' jechuun miira aariin ibsiti.
Erga 2013 as Faawundeeshiniin Qabballe Duubaa waan nagayaarratti hojjechuu akka jalqabes nutti himteetti.
Booranaa fi Gabraan walfakkeenya hedduu waan qabaniif addaan baasuniyyuu nama dhiba jetti.
''Waaqi nagaa nuu kenninnaa, nagaan taahuu mallee, nu obboleeyyan tokko - biyyiti gargar nuun beektu.
Ani maqaan kiyya Qabballe Duubaa. Booranillee Qabballe Duubaa qaba - Gabrillee Qabballe Duubaa qaba.
Goodayyaa suuraa Qabballee Duubaa fuulaa itti dhalattetti
Rakkoo (dhibii) loqodaa
Hanga ammaa gara Itoophiyaa ceete akka hin beekne ka dubbattu Qabballeen, hawaasa Booranaa fi Gabraa gama Itoophiyaan jiru ilaaluu akka feetus Firaa'olitti himteetti.
Miidiyaa hawaasaarratti wayita waa maxxansitu Oromoonni hedduun 'comment' akka kennan dubbatti. Kanas yeroo hedduu hubachuun akka ishee rakkisu ibsiti.
''Warri Qabballee keenya jedhanii barreessu. Anin akkan se'adhetti 'Qabballee from Kenya'. Akka keennatti 'teenna' jenna.
Afaan kanallee barachuu fedha. nam keenna ka Itoophiyaa jirullee argee, waan kana barachuun fedha,'' jetti.
''Waaqi karaa hedduu nu banuut' jira. Ganna 5 kan gad-deemu keessatti, iskuula (mana barnootaa) guddaa ijaarrachuu feena,'' jetti.
Kana malees waggoota shanan dhufan keessatti warshaa 'sanitary pads' fi butaantaa 'qanxarroo' oomishu Marsabiit keessatti hundeessuu karoorfattee jirti.
Ergaa ijoollee dubraaf qabdu
''Gar feetee dhufnaan, [abjuun kee ni milkaa'a.] Ol ejjedhu.
Yoo soomtee uriin baate, deebitee ilmaan teenna taan dhibii qarqaaruu malte.
Obboleeyyaan tantee kan waliin dhalattan callaa niti - [hawaasni] cufti obboleeyyan tan teeti. Deebi'i qarqaari.
Masoomoo teessanitti jabaadhaa. An masoomotu armaan na baase. Aayyoofi aabboon hin soomne. Obboleeyyan tiyyas akkas hin soomin.
An ilmee dubraati jettee, harka marattee hin taa'in. Namni dhufee haraka qabee si qarqaaru hinjiru. Ufillee of qarqaaru malte,'' jechuun gorsashee obbaasti Qabballe Duubaa.
Qabballeen wayita ammaa dira guddoo Keenyaa - Naayiroobiitti digrii lammaffaa, gosa barnootaa 'epidomology'n soomaa jirti.
''Gaafa durii namni hedduun soomee (baratee) hinjiru,'' kan jettu Qabballe, dubartii Faaxumaa Abdulqaadir jedhamtu akka fakkeenyaatti ilaaleen guddadhe jetti.
Viidiyoo Waldhibdee hawaasa Booranaa fi Gabraa furmaata dhabe